काजू केक - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
खाजा52 मिनेट8 व्यक्ति
यो केक मैले Thermomix® पत्रिकामा देखेको रेसिपीको कारण आएको हो। मूल नुस्खा संग बनाइएको थियो बदाम तर मैले तिनीहरूलाई परिवर्तन गरेको छु काजू, विशेष गरी मेरो श्रीमान्को बारेमा सोच्दै जसले तिनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ।
ठूलो परिवार हुनुको बारेमा राम्रो कुरा यो हो कि, जब तपाइँ टेबलमा मिठाई राख्नुहुन्छ,5मिनेट भन्दा कममा यो गायब हुन्छ। र यो समय अपवाद थिएन। उनीहरूलाई साँच्चै मन पर्यो सुक्खा फल संग मिठाई को विपरीत.
निस्सन्देह, धेरै सावधान रहनुहोस् नटबाट एलर्जी, किनकि यो केक पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
यदि तपाईं काजु नट प्रेमी हुनुहुन्छ भने ... यसको स्वादको मजा लिन स्पन्ज केक किन बनाउनुहुन्न?
तयारी समय: 40M
खाना पकाउने समय: 12M
कुल समय: 52M
२g० ग्राम भुनी काजू (अनसोल्टेड)
मोल्डमा मोल्ड फैलाउन
धुलोको लागि चिनी Icing
हामी ओभनलाई २००º सम्म गर्मी माथि र तल दियौं।
हामी काजुलाई सिसामा राख्यौं र कुच्यौं १० सेकेन्ड, प्रगतिशील गति 10-7। गिलास र रिजर्भबाट हटाउनुहोस्।
सिसा नधोईकन, हामीले चिनी र अण्डाहरू राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी पुनः अनुसूची5मिनेट, गति 4, तापमान सेट बिना।
आरक्षित काजू, कागतीको रस र कार्यक्रम थप्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
मिश्रणलाई बटर मोल्डमा हाल्नुहोस् र minutes० मिनेटसम्म बेक गर्नुहोस्।
जब समाप्त हुन्छ, यसलाई चिसो हुन दिनुहोस् र आईसिंग चिनी छर्कनुहोस्।
थप जानकारी - बदाम र पेपरिकाको साथ मासु पाई
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, Postres, पेस्ट्री
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » काजू केक
लिडिया ग्रानेरो (लिडियर्ट) भन्यो
कस्तो राम्रो विचार, मलाई मिठो र थोरै नुनको भिन्नता मनपर्दछ।
लिडिया ग्रानेरो (लिडियर्ट) लाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, त्यसपछि काजूलाई नुनको साथ राख्नुहोस्, किनकि यसले मीठो र धेरै धनी नुनिलो स्प्रेस दिन्छ।
नमस्कार, बधाई सबैभन्दा पहिले किनभने तपाईंको वेबसाइट महान छ र मलाई यो मन पर्छ, म अत्यन्त अंकुशमा छु। मैले तपाईंलाई यस पटक सोध्न चाहेको प्रश्न काजूको बारेमा हो, तिनीहरू नुनिलो हो भने के हुन्छ ??? मैले तिनीहरूलाई नुन बिना देखेको छैन, के यो पनि हुन सक्छ? के तपाइँ नुन हटाउन केहि गर्न सक्नुहुन्छ ??
Adela लाई जवाफ दिनुहोस्
अडेला, यो केक वास्तवमा एक थर्मोमिक्स पत्रिकाबाट लिइएको हो र यो बदाम केक थियो। रेसिपीमा मैले भने कि तिनीहरू नुन बिनाका थिए, त्यसैले मैले यसलाई सामग्रीहरूमा निर्दिष्ट गरें। मेरो काजुमा नुन थियो, र हामीले यस टचलाई मनपरायौं तर मैले तिनीहरूलाई पानीले धोएर अर्को पटक सुकाउने विचार गरें।
यदि तपाईं हिम्मत गर्नुहुन्छ भने हामीलाई कस्तो छ हामीलाई बताउनुहोस्?
काजुको केकमा पीठो छैन? तपाईले हामीलाई दिनु भएको सबै व्यंजनहरुका लागि धन्यबाद।
मामेन्चुलाई जवाफ दिनुहोस्
यसले पिठो समावेश गर्दैन, त्यसैले यो celiacs को लागी उपयुक्त छ तर नट्सलाई असहिष्णुको लागि होईन।
धन्यवाद, यो महान छ!
Nu लाई जवाफ दिनुहोस्